‘ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलले प्रवासी नेपालीहरूमा आफ्नै मौलिकता फर्काउन मद्दत गर्नेछ’ : उपाध्यक्ष डा. के सी – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ कला/साहित्य ∕ ‘ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलले प्रवासी नेपालीहरूमा आफ्नै मौलिकता फर्काउन मद्दत गर्नेछ’ : उपाध्यक्ष डा. के सी
दीप संञ्चार वैशाख १४, २०७८ गते २३:४५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, – गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल–२०२१ को अवधारणा एकदमै उत्कृष्ट रहेको बताएका छन् । ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलसम्बन्धी भएको छलफलमा उपाध्यक्ष केसीले यस प्रतियोगिताले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई आकर्षित गरेको बताएका हुन् ।